DNS uye DHCP yakavhurikaSUSE 13.2 "Harlequin" - SMB Networks | Kubva kuLinux
DNS uye DHCP yakavhurikaSUSE 13.2 "Harlequin" - SMB Networks
phico | | Networks / Maseva, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
General index yeakateedzana: Computer Networks yeSMEs: Sumo
Chinangwa chakakosha chechinyorwa chino kuratidza kuti tingaite sei a DNS uye server yeDHCP mune yakavhurikaSUSE kuburikidza neyakanaka kwazvo YaST yekugadzirisa chishandiso, uye zvese -kana kuda- kuburikidza neayo graphical interface.
Isu tinokuvimbisa iwe kumisikidza kuzere kuburikidza graphical interface, kunze kweku -Mutemo wega wega une zvawo, handiti?- yevaviri vekunyaradza kuti vatarise mashandiro akanaka evaviri Bind9 + ISC-DHCP-Server, yakagadzirirwa kushandisa iyo YaST - Zvakare imwe Setup Chishandiso inova seti yemidziyo yakanaka kwazvo yesoftware manejimendi uye kugadzirisa system.
Yekutanga sevhisi -uye yakakosha pane edu maitiro maitiro- ayo anofanirwa kuitiswa muSME Network, ibasa DNS - DHCP. Kana isu tisingade kumisikidza maneneti maratidziro epamhepo eimwe neumwe emabasa, hatifanire kuita pasina sevhisi yeDHCP, sekutsanangurwa kwayakazoitwa. Kune zvekare nguva yebasa kana NTP.
1 DNS: kumashure
3.1 DNS mibvunzo inogadzirwa neWindows vatengi
4 Iyo kernel iyo inoisa yakavhurikaSUSE ine desktop desktop
5 Mazano akakosha
6 Sevhisi dzatinogona kudzima kuchengetedza zviwanikwa
8 Nhanho-nhanho kumisikidza kuburikidza nemifananidzo
8.1 Kuisa rutsigiro
8.2 Kuisirwa, kuziviswa kwenzvimbo dzekuchengetedza uye system kugadzirisa
8.3 Kuiswa uye kumisikidzwa kweDNS uye DHCP masevhisi mune yakavhurikaSUSE
Muna Kubvumbi 2013 takaburitsa mu KubvaLinux akateedzana ezvinyorwa zvishanu zvakatsaurirwa kuita yekutanga DNS pane Debian:
Yekutanga Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (I)
Yekutanga Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (II)
Yekutanga Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (III)
Yekutanga Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (IV)
Yekutanga Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (V)
Kuunganidzwa kwezvinyorwa zviri pamusoro muHTML fomati zvakatopihwa kurodha Kunyangwe zvakanyorwa -kareko- Naiyo Debian "Svina" kuburitswa, tsananguro uye pfungwa dzakafukidzwa mazviri dzinoramba dzichinyatso kushanda.
Ndokusaka isu tisiri kuzoita yakarongeka Nhanganyaya kune iyo DNS nyaya. Verenga izvo zvinyorwa kana iwe uine chero mibvunzo, kwavanopawo zvinongedzo kune akasarudzika DNS mabhuku.
En vhura, akakosha mafolda uye mafaera ane chekuita nebasa iri ndeaya:
mapurogiramu / usr / sbin / named-checkconf, / usr / sbin / named-checkzone, / usr / sbin / named-compilezone, / usr / sbin / named-journalprint
folda / usr / share / doc / mapakeji / kusunga /
folda / var / lib / akatumidzwa /
folda / var / lib / akatumidzwa / dyn /
chiratidzo chekufananidza / usr / sbin / rcnamed
Chinangwa cheDynamic Host Configuration Protocol - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), ndeyekupa maratidziro epaseti yepakati-kuburikidza neDHCP server- pachinzvimbo chekugadzirisa wega wega nzvimbo yekushandira. Komputa yakagadzirirwa kushandisa DHCP haina simba pamusoro payo static IP kero. Iyi komputa yemutengi inogadzirirwa nenzira yekuti inobvumidza yayo netiweki kugadziridza otomatiki, zvinoenderana neserver rairo.
DHCP sevhisi inoita kuti hupenyu huve nyore kune ma Network Administrators. Nekugadzirisa iyo DHCP server, unogona kutsanangura parameter senge domain zita, gedhi, nguva kana nguva server, DNS maseva, WINS server kana ikashandiswa, shambadzira IP kero - nhepfenyuro, IP kero uye network mask yekombuta yemutengi, zita rekombuta yekombuta, uye mamwe akawanda ma parameter.
Chero shanduko, kunyangwe shanduko huru kumiparamende ine chekuita neIP kero uye maratidziro enetiweki, inogona kuitwa nepakati, kana isu tikachinja kana kushandura marongero eDHCP server.
Kazhinji, iyo DHCP sevha inochengeta rekodhi yakazara ye IP kero yakapihwa kana lease, uye kazhinji kiyi paramende ndiyo kero yeMAC yechero network kadhi kana NIC - Network inowanikwa Kadhi. MukuvhuraSUSE, iyo IP kero yakaderedzwa kana mareesi akapihwa neDHCP anochengetwa mufaira /var/lib/dhcp/db/dhcpd.leases.
Package dhcp-doc, iyo yakaiswa mufaira / usr / share / doc / mapakeji / dhcp-doc, inopa zvinyorwa zvakanaka kwazvo - muChirungu- nezve sevhisi iyi.
Iyo DHCP server yekumisikidza faira iri /etc/dhcpd.conf. Imwe faira yekugadzirisa DHCP iri / etc / sysconfig / dhcpd, uye ndipo paunotsanangudza kuti ndeapi network network -kana ndeapi maratidziro eneti- sevha inopindura
Uye sezvo isu tiri pakati pe systemd, isu zvakare tine iyo faira /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service.
Sezvo isu takavimbisa kusashandisa koni, isu takasiya mimwe mibvunzo kune vadikani ve Bash. Nezve zvinyorwa Iyo Console Hairume.
Kunyangwe isu takavimbisa kusashandisa koni yacho kunze kwenguva dzinoverengeka, isu tinokurudzira mhanya unotevera mirairo -semudzi- mushure mekunge iyo DNS - DHCP sevhisi yapa ingangoita imwe inesimba IP kero, iyo inofungidzira kuti vapedza kumisikidza kuzere kweese masevhisi uye vari munguva yemahara yekutarisa:
systemctl chinzvimbo chinonzi.service
systemctl chinzvimbo dhcpd.service
systemctl chimiro dhcp-server.service
Kune vanorwara ve «shanduro»Tinokurudzira kuti utarise -kunyanya kumisi yemisoro- kumafaira:
uye zvakajairika kune ese mafaera ari mufaira /etc/init.d.
DNS mibvunzo inogadzirwa neWindows vatengi
Zvekare, uye mune koni, mhanya semushandisi mudzi rairo:
Pedza imwe nguva uchiona maWindows vatengi vachiramba vachitsvaga DNS yemasaiti ari kunze kweiyo Enterprise LAN. Mumuenzaniso wakagadzirwa muchinyorwa chino, hapana redirector anosanganisirwa - kumberi, nechinangwa chakajeka chekuratidza chimiro cheMicrosoft® Windows masisitimu anoshanda.
Iyo kernel iyo inoisa yakavhurikaSUSE ine desktop desktop
Ndiko kusarudza kwedu kushandisa musimboti wakatsiga sezvinobvira kune iyo servidores. Ipapo isu tinokurudzira maitiro ekuzviita.
Sezvo isu tinosarudza kuisirwa neLXDE desktop, kuvhuraSUSE kuisa nekumisikidza iyo «kernel-desktop»Yakagadzirirwa pamatafura.
Kana isu tikazoda kushandisa yakajairwa kernel - kernel-defaultIsu tinongofanirwa kuiisa kuburikidza neYaST Package Manager, titangise sisitimu, sarudza «Yepamberi sarudzo dzekuvhuraSUSE»Pane chidzitiro chekumba, uye sarudza iyo kernel-default. Shanduro dzese tsanga dzakafanana.
Chekupedzisira, isu tinofanirwa kubvisa iyo kernel-desktop kuburikidza neMutariri wePakeji mumwe chete, kubvira iyo GRUB anozviona zviri zvechinyakare kupfuura izvo kernel-default, uye kana iripo ichagara ichisarudza senzira yekutanga. Sezvo isu tisingade "kutenderedza tichitenderedza" iyo GRUBTinosarudza kubvisa desktop kernel, nekuda kwekuti hatichazoishandisa zvakare.
chitsamba: Patinobvisa sisitimu kubva kernel-desktop, ese akaiswa mavhezheni eiyo kernel anobviswa otomatiki. Tinogona kutarisa izvi zvakare nekusarudza "Yepamberi sarudzo dzekuvhuraSUSE" pachikona chekumba
Usatanga mukana wekuti ushandise DNS - DHCP sevhisi nechero hurongwa hwekushandisa, usati watanga kujekesa iwo akakosha edzidziso dzepfungwa. Nemasevhisi akakosha kunetiweki seDNS, zvikanganiso zvepfungwa zvinobhadhara zvakanyanya munzvimbo yekugadzira.
Sevhisi dzatinogona kudzima kuchengetedza zviwanikwa
Kuburikidza neiyo module yeYST «Service Manager», kana kumisikidza kwese kwapera uye kuitira kuchengetedza zvishandiso zvehardware, tinogona kudzima nhevedzano yemasevhisi ayo, mune ino kesi, asina kukosha. Mienzaniso:
makapu: kudhinda system Yakajairika Unix Kudhinda Sisitimu
- lvm2-lvmetad: Inonzwisisika Vhoriyamu Maneja metadata daemon, chete kana isu tisingashandise zvine musoro mavhoriyamu
ModemManager: Modems Manager
Ndiri muvengi weshanduro, ok?
GRUB: raira koni GRuye Unified Booloader
NTP: NEtwork Tzita Protocol. Protocol inoshandiswa mukuenzanisira kwemaawa emakomputa akasiyana kuburikidza netiweki
Lan: Nharaunda yenharaunda - Local Area NEtwork
SPF: «Sender Policy Sisitimu«. Anti SPAM mashandiro anotendera tsamba server kuti ione kuti iyo SMTP mavambo inoshanda kune kero yekutumira email.
TSIG: Transaction siginecha - Transaction SIGmuzvarirwo. Inotsanangurwa mu RFC 2845 "Chakavanzika Key Transaction Kuvimbiswa kweDNS«
UUID: Yakasarudzika Universal Chitupa - Yepasirese Yakasarudzika Chitupa
Nhanho-nhanho kumisikidza kuburikidza nemifananidzo
Isu takatora zviyero makumi manomwe nenomwe zvekuratidzira Nhanho nedanho sekutendeka sezvinobvira. Mune yega yega yekuisa skrini, kuvhuraSUSE kunoita kuti basa redu rive nyore nekuvapo kweRubatsiro bhatani - Rubatsiro-kazhinji inowanikwa muzasi kuruboshwe.
Hatizopa tsananguro yeimwe neimwe skrini sezvo ichionekwa seisina basa. Sezvo chirevo ichi chichienda, «Mufananidzo wakakosha chiuru chemazwi".
Mufananidzo 01 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 02 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 03 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 04 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 05 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 06 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 07 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 08 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 09 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 10 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 11 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 12 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 13 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 14 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 15 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 16 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 17 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 18 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 19 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 20 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 21 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 22 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 23 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 24 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 25 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 26 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 27 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 28 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 29 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 30 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 31 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 32 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 33 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 34 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 35 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 36 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 37 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 38 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 39 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 40 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 41 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 42 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 43 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 44 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 45 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 46 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 47 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 48 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 49 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 50 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 51 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 52 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 53 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 53-A - DNS uye DHCP yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 54 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 55 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 56 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 57 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 58 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 59 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 60 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 61 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 62 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 63 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 64 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 65 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 66 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 67 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 68 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 69 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 70 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Mufananidzo 71 - DNS uye DHCP mune yakavhurikaSUSE
Senzira yekumisikidza isu tinokwanisa kushandisa DVD chifananidzo senge icho chataishandisa kugadzira ichi posvo kuvhuraSUSE-13.2-DVD-x86_64.iso, kana imwe vhezheni yepamusoro. Kana iyo michina isina DVD inoridza, kana kana zviri nyore kwatiri kushandisa ndangariro - pen drive, tinogona kuzviita sezvakaratidzwa muchinyorwa Memory neye autostart yekuisa Debian, CentOS, kana kuvhuraSUSE. Mushure mekuisa iyo inoshanda sisitimu, kugadzirira ndangariro iwe yaunogona kuisa uye kushandisa chirongwa Munyori wemifananidzo naSUSE Studio.
Zvisinei isu tinokurudzira test pakutanga pamushini chaiwo.
Kuisirwa, kuziviswa kwenzvimbo dzekuchengetedza uye system kugadzirisa
Tinokurudzira yevhareji server dns.fromlinux.fan anenge 768 megabytes e RAM uye 20 GiB hard drive. Ndangariro ndedzekuti tichazviita ne graphical interface.
In the 05 imageNezve iyo Network Kugadziriswa, isu hatizivise chero Zita Server nekuti iro basa ndiro rinofanira kuiswa. Kana iwe ukazivisa imwe sevha, ichaonekwa seye redirector - kumberi, uye tinoda kuita sevhisi nenzira iyi kuti tione kusimbirira kweMicrosoft® Operating Systems pakutsvaga kwavo nzvimbo dzeInternet.
Isu tinogadzira yakasarudzika yakasarudzika yekumisidzana yezvikamu zvinoenderana neyedu chaiyo kuravira. Inzwa wakasununguka kusarudza nekushandisa iyo yaunoda.
15 mufananidzo: "Fstab sarudzo". Isu tinosarudza kuti zvikamu zvacho zvakaiswa zvinoenderana neLABEL yavo - LABEL uye kwete zvinoenderana neUUID yaro, inova sarudzo yekusarudzika. Mushure mekuisa system verenga zvirimo mufaira / etc / fstab.
Seva yeNTP yekufananidza iyo nguva iri chaizvo iyo Host Hypervisor uko iyo DNS - DHCP server inomhanya.
Nenzira imwecheteyo yatakasarudza iyo LXDE desktop nekuti inokwana zvakakwana zvido zvedu, unogona kusarudza chero imwe inopihwa neyakaisirwa iyo vhura.
Zita remushandisi akasarudzwa «Buzz»Ndekukudza kwatinofarira kugovera. Asi hapana. 😉
In the 22 imageCherekedza kuti isu tinovhura iyo SSH chiteshi muFirewall, uye zvakare gonesa iyo SSH sevhisi.
Ndokumbira utore nguva yako kana uchisarudza software yekuisa. Iyo yakanakisa Package Manager yakakodzera kufamba, sezvakaratidzwa mu 23 image.
Mifananidzo 35, 36, 37 uye 38: Mushure mekuisa iyo inoshanda sisitimu kubva kuDVD kana imwe tsigiro, chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuzivisa matura ekuvandudza maitiro edu, angave ari emuno kana paInternet. Kwedu, isu tinodzima akasiyana mafosheni anovhuraSUSE pane avo maseva paInternet, uye isu tinowedzera edu ari eMunharaunda. Sezvinei, isu tine zvinyorwa Database, Packman, Updates, Oss y Asiri-Oss, Zvakakwanira iro basa rakarongedzerwa, uye kutiita dhesiki nemutemo wese. 😉
Mifananidzo 39 ne40: Inotanga uye inopedza iyo yekuvandudza yePakeji Maneja weiyo YaST. Pachiratidziro chekutanga tinosiya zvakasarudzika sarudzo. Isu takangobaya bhatani Shandisa.
Mifananidzo 41, 42 uye 43: Mushure mePakeji Maneja kuzvimisikidza pachayo, inovhura iyo skrini nemapakeji kubva kune yakasara sisitimu kuti ivandudzwe. Mariri, isu tinogamuchirawo zvisarudzika zvisarudzo.
44 mufananidzo: Classic skrini yekupedzisa chikamu muLXDE.
Kuiswa uye kumisikidzwa kweDNS uye DHCP masevhisi mune yakavhurikaSUSE
47 mufananidzoNgatisakanganwe kugadzira kiyi yakavanzika yekuvandudza kwesimba kwenzvimbo dzeDNS, dzinova fromlinux.fan y 10.168.192.
49 mufananidzo: Ngatitarisei zvakanaka pabhokisi rinowanikwa kumusoro «Zvirongwa zvezoni fromlinux.fan«. Isu tinobvumira zvine simba kugadzirisa uye kuendesa zone kune yemuno network hapana chimwe.
53 mufananidzo: Kana tikaratidza runyorwa «Tanga:»YeDNS zvinyorwa, tichaona kuti tinogona kuzivisa zvinotevera:
A: IPv4 domain name translation
AAAA : IPv6 domain name translation
CNAME: alias yezita rezita
NS: zita server
MX: kutumira tsamba
SRV: SRV registry revhisi, inoshandiswa zvakanyanya mu Active Directory uye mamwe masevhisi
TXT: Kunyoresa mameseji
SPF: Sender Policy Sisitimu
54 mufananidzo: kuvhuraSUSE kunoita kuti hupenyu hwedu huve nyore nekusafanira kuzivisa reverse DNS marekodhi. Isu tinobvumidza inoshanduka inodzosera kumashure zone yekuvandudza uye nzvimbo yekuchinjisa kune yemuno network
55 mufananidzo: Mushure mekupedza iyo DNS yekumisikidza, hapana zvirinani pane kutarisa mashandiro ayo uye kugadzirisa kurongeka, pachishandiswa akati wandei akareruka console mirairo.
56 mufananidzo: Usati wagadzirisa DHCP, isu tinofanirwa kugovera kunetiweki interface iyo isu yatichasarudzira sevhisi iyoyo - inogona kuve imwe kana anopfuura maumbirwo - nzvimbo iri muFirewall. Isu tinosarudza Yemukati Nzvimbo inova iyo yeLAN yedu.
Mifananidzo 61 ne62: Kuti tizivise iyo inesimba DNS tinofanirwa kuenda ku «Nyanzvi DHCP Server Kugadziridza".
63 mufananidzo: Tinosarudza subnet uye tinya pane bhatani «Akafambiswa«, Uye sarudza sarudzo«TSIG kiyi manejimendi".
64 mufananidzo: Isu tinosarudza iyo TSIG kiyi inogadzirwa panguva yekugadziriswa kweDNS. Kana iwe usina kuzviita ipapo, iwe unogona kuzviita izvozvi uye kugadzirisa zvakare iyo ine simba yekuvandudza yeDNS nzvimbo maererano nekiyi inogadzirwa pano.
65 mufananidzo: Tinodzokera kune yakasarudzwa subnet uye ikozvino tinobaya pane bhatani «Hora".
66 mufananidzo: Isu tinosarudza Range rezvatinofarira uye tinya pa «Dynamic DNS".
68 mufananidzo: Takatanga timu openuse-desktop.fromlinux.fan chinova chinhu chechinyorwa chedu chinotevera, icho chatinoisa nekugadzirisa ne dns.fromlinux.fan ichimhanya, uye isu tinotarisa nemirairo yakapfava yekunyaradza iyo DHCP yakagadziridza nenzira kwayo DNS, uye kuti iyo yekumberi uye yekudzosera DNS marekodhi eiyo mutengi inodzoserwa.
Joinha isu pane inotevera inotevera!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » DNS uye DHCP yakavhurikaSUSE 13.2 "Harlequin" - SMB Networks
Ndatenda zvikuru nemupiro, ini ndinotanga kuzviita kune iyo tsamba, ivo vaiwanzoshanda
Unogamuchirwa Rulf. Basa hombe nderekubatsira avo vasingade iyo Console kana Terminal zvakanyanya, uye kune avo vachangosvika munyika medu kubva kuWindows - kana vari kufunga nezve kutora leap- uye voona kuti kune ma distros anopa mukana we kugadzirisa masevhisi akaomarara uchishandisa graphical interface.
Pindura kuna federico
Eduardo Noel akadaro
Chinyorwa chakanaka kwazvo !!!
Ini ndinobvumirana newe kuti inogona kuve nzvimbo yekutanga kune avo vanoda kutama kubva kuWindows.
Pindura Eduardo Noel
Ngatibude pachena kuti pasina masevhisi aya hapana network yakakosha, kana tichitaura nezveDNS neDHCP, tinotaura nezve rutsigiro rwakakwana uye hwaro hwese hwetiweki, hazvina basa kana iri SME kana kwete, iyo zvinoita kunge manyepo ekuti isu tinogunun'una nezvekushaya ruzivo paruoko uye FICO irikutipa isu nenzira isina udyire. Hatina zano rekukosha kwechipo ichi kune nyika yeLinux uyezve kune avo vedu vanotenda uye vanovimba yemahara software. Zvinotora basa rakawanda kugadzira zvakapetwa senge izvi, izvo zvisingaenzaniswi, zvinoenda zvinopfuura izvo zvinogona kufunga pfungwa dzedu. Ini pachangu, ndiri kushamiswa nemashoko mashoma kwazvo uye kushanya kushoma kwenyaya ingangodaro inotipa mukana wekupinda kune chero kambani kana kuti zvinoita kuti tishande chero kupi kana tangozviziva.
FICO inoenderera nemipiro yako iyo vazhinji vedu vanozotevera mumakwara ako. Ndatenda !!!
Ndatenda zvikuru kune VENYU mose nekuda kwemashoko enyu akanaka kwazvo, akarurama uye nenguva. Ichokwadi kwazvo kuti ndiyo sevhisi huru mune chero network, kusanganisira iyo Internet pachayo.
Yakakura uye inonetesa basa Federico, imwe nhanho nhanho yandinotevera, uye pasina kupokana zvese zvinopera sekutaura kwako, mwero weruzivo rwezvinyorwa zvako unoita kuti uone ruzivo iwe urwo munzvimbo. Ndatenda zvikuru nemupiro wakanaka wakadai.
Ndatenda nekupindura, Lagarto !!!. Mirira inotevera paCentOS 7 nemasevhisi akafanana, asi panguva ino, kunyaradza. Zvinonetesa kuita posvo yerudzi urwu nemifananidzo, kunyange ndichivimba kuti vatsva vanobva kuWindows world vakaifarira. 😉
Ismael Alvarez Wong akadaro
Mhoro Federico, ichi chikuru, chinonetsa, chinobatsira uye chakanyanya kukosha chinyorwa nezve DNS uye DHCP masevhisi awachangobva kuburitsa. Zvese zvinotsanangurwa kwazvo uye zvakadzama ruzivo kuburikidza nemifananidzo yakawanda.
Yakakura maitiro ekugadzirisa iyo DHCP server kubvumidza ine simba kumutsiridza kweDNS marekodhi kune ese ari kumberi uye ekudzosera nzvimbo, uchishandisa imwecheteyo TSIG kiyi inogadzirwa mune iyo DNS server kumisikidzwa.
Uye pamusoro pazvo zvese mukugovaniswa kwe "graphical" maseva senge openSUSE (iyo yandisati ndamboshanda nayo uye ikozvino posvo iyi inondikurudzira kuti ndiidzidze) iyo inogona kubatsira zvakanyanya kune Windows sysadmis inosarudza kuita "mushe" kutama kuLinux.
Hapana kana icho chezvinyorwa zvakaita seichi chakakodzera kuteedzera zvimwe zvese zvinyorwa zvaunoronga kuramba uchitsikisa nezve akateedzana "maSME".
Pindura kuna Ismael Alvarez Wong
Mhoro Wong !!!. Wakatosvika pane ino positi. Ndiri kuona kuti wave uchishamiswa nemamwe maficha emifananidzo eYaST. Ndizvozvo shamwari. Iyo inogadziriswa nenzira yekuti avo vanobva kuWindows havanzwe kusiiwa pakutanga nekuda kwekushandisa kweconsole muLinux.
Maonero angu ndeekuti zviri nyore kuita, kumisikidza uye kubata DNS - DHCP vaviri kuburikidza nekoni. Asi ini handiregi kucherechedza mabhenefiti eiyi distro.
kuvhuraSUSE, uye mutsigiri wayo mukuru, SUSE, ndezvakawanda-chinangwa madhiri anouya neYaST ine simba kuita kuti hupenyu huve nyore kune maneja evashandi.
Ndiri kufara zvikuru kuti iwe unoramba uchiverenga nekudzidza iyo PYMES nhevedzano. Ndinokumirirai muzvikamu zvangu zvinotevera. Mufaro!!!.
Kunyangwe ndanga "ndakakombamirwa" kwechinguva nekuda kwenyaya dzebhizinesi, iyi distro inoratidza mhando uye kuzvipira kwevanjiniya, ini handisi kuishandisa sevhavha asi sedesktop, asi ndinogona kupupura kune zvivakwa zvainopa, izvozvi release modhi: Tumbleweed uye Leap yakanaka kwazvo, yekutanga kumonera ... vanhu vanofarira kumonera (: uye Svetuka kune vashandisi vakanyanya, asi kujekesa kuti Leap ine isingachengetedze mapakeji shanduro uye iri nyore kwazvo kune anovandudza / sysadmin uyo anoda kushandisa matekinoroji azvino Opensuse ari kunyatso kuendesa tsime pamusoro pevhareji chigadzirwa, sarudzo yekufunga.
Ini ndagara ndakasarudza kuvhuraSUSE Desktop yeiyo Enterprise Network. Izvozvi zvandakazviedza mumasevhisi, zvinondikodzerawo. Ndinobvumirana newe mune zvese.
Maitiro ekunyora rekodhi uye kugadzira an animated gif
DRLM: Inesimba Dambudziko Rekudzosera maneja yeLinux